China Imbewu Yokutshala Yemifino kanye nabaphakeli RY AGRI
I-RY yemifino yemifino isebenzisa ithuluzi lokulinganisa imbewu elisebenza ngokunemba okuphezulu, elenza ukunemba kwezimbewu, ukusebenza kahle kwezimbewu, izikhala zezitshalo nokuhlukaniswa kokusanhlamvu okungcono kakhulu kunokuhlwanyela ngesandla; abasebenzisi bangashintsha amasondo ahlukene wokuhlwanyela ngokwezidingo zabo, futhi umshini owodwa ungabona amabanga ahlukene wokutshala. Imbewu yemifino.
Wonke umshini unesakhiwo esilula, ukwakheka kobuhlakani nezinyawo ezincane. Ngemuva kokuba lo mshini usetshenzisiwe, uzonciphisa kakhulu ukusebenza kwabalimi, ugcine indawo yokutshala eshedeni ihlanzekile futhi ingangcolisi umoya, futhi igcwalise igebe lokutshala imifino yasekhaya nemishini yokuhlwanyela eshedini.
Isitshalo semifino singakhula ama-radishes, izaqathe, iklabishi, okusanhlamvu, ukolweni, amakhambi, izimbali, amalikhi, ama-turnips, ama-beet, u-anyanisi, isipinashi, amahlumela oqalo aluhlaza, iklabishi, isilimo esinengono emnandi edliwayo, ibasil, ulethisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi wasentwasahlobo, iqhwa elibomvu, isesame, ukudlwengula, upelepele, ukholifulawa omhlophe, i-broccoli, izimbali zokudlwengula, utshani befolishi nezinye izimbewu ezincane neziphakathi nendawo enobubanzi obungu-2-13.5 mm.
Inkampani yethu inezinhlobo ezahlukene zabatshali.
1. Isitshali semifino esisebenza ngogandaganda (imigqa 6-12)
2. Isitshaleli sesandla, okungabizi, nekhwalithi ezinzile.
3. Isitshaleli semifino esisebenzisa u-Petroli
4. Isandla se-Manual push push yemifino
Injini engu-8hp kaphethiloli
1. Isikhala sokutshala, isikhala somugqa nokujula kungalungiswa ngokuthanda.
2. Ukuhlwanyela kungatholakala ngembobo eyodwa nohlamvu olulodwa ngo-99%.
3. ukudonsa, ukutshala, ukumboza ngenhlabathi, ingcindezi esinyathelweni esisodwa
4. Kukufanele ukutshalwa kwayo yonke imifino esanhlamvu encane, izimbali, okusanhlamvu nemithi yamaShayina.
Lo mshini wokuhlwanyela imbewu ungashintsha isondo lokuhlwanyela ngokuya ngezinhlamvu ozihlwanyelayo, futhi ungalungisa nokujula kokuhlwanyela, izikhala zemigqa, nokubeka izikhala kalula. Lesi sitshalo esidonsa ngesandla kulula ukusisebenzisa futhi sisetshenziselwa kabanzi ukuhlwanyela imbewu ehlukahlukene yemifino.
Sisebenzisa ibhokisi ukupakisha lo mshini wokuhlwanyela imbewu. Okokuqala sizowuhlanganisa wonke umshini ngefilimu epulasitiki ukuvikela ukuthi umshini ungoni futhi uklwebheke.
Mayelana nalokhu okutshala imbewu yemifino, sinezindlela ezimbili zokuhamba: ulwandle nomoya. Singahambisa futhi umshini kwi-ejenti yakho eChina uma unaleli ejenti.
Langaphambilini Okunye Pump Pump
Olandelayo: Umtshali wemifino-1